Ciyaartoyda Ee Xidigaha Ku Soo Biirtay Ama Ka Baxday Dhamaan 26-ka Kooxood Ee Champions League U Soo Baxay.Akhriso Liisaska Oo dhan. - Gool24.Net
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayay kooxaha Yurub si wayn uga adeeganayaan gaar ahaan kooxaha qaar ayaa haddaba diyaar u ah in uu xili ciyaareedka cusubi bilaamo kadib saxiixo muhiim ah oo ay sameeyeen halka kuwo kale ay wali u baahan yihiin in ay suuqa ciyaartoy ka sii raadsadaan.
Waxaa jira 26 kooxood oo haddaba si toos ah ugu soo baxay tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions league kuwaas oo diyaar garow kala duwan ugu jira in ay ciyaartoy muhiim ah la soo saxiixdaan inta aan la gaadhin xili ciyaareedka cusub.
Iyada oo uu haddaba socdo isreeb reebka loogu jiro lixda kaalmood ee baaqiga ka ah 32ka kooxood ee bisha August loo samayn doono isku aadka Champions League, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa diyaar garowga kooxaha Champions league u soo baxay iyo sida ay suuqa ugu jiraan.
Haddaba halkan kaga bogo xogta suuqa ee ay shabakada Gool24 idiinka soo gudbinayso 26ka kooxood ee heerka guruubyada Champions League u soo baxay ee diyaar garowga ku jira iyada oo aad halkan ka akhrisan karto koox kastaba ciyaartoyda ku soo biirtay iyo kuwa ka tagay.
Kooxaha Champions League Ku Jira Iyo Dhaq Dhaqaaqa Ay Suuqa Ka Sameeyeen:
Atlético Madrid: Kooxda Atletico Madrid waxay haddaba la soo saxiixatay saddex ciyaartoy oo ay kooxdeeda ku soo xoojisay waxaana socda olole wayn oo ay kooxda Simeone ku donayso in ay kooxdeeda ku soo xoojiso iyada oo og in Griezamnn uu bixi doono. halka ka eeg dhaq dhaqaaqa Atletico Madrid.
Ciyaartoyda Ku Soo Biirtay: Felipe Augusto (Porto), Nicolás Ibáñez (Atlético San Luis), Marcos Llorente (Real Madrid)
Ciyaartoyda Ka Baxday:Lucas Hernández (Bayern), Diego Godín (released), Juanfran (released), Axel Werner (Atlético San Luis, amaah), Luciano Vietto (Sporting CP)
Bayer Leverkusen: Kooxda reer Germany ee Bayer Leverkusen waxay haddaba ka mid tahay kooxa suuqa ku jira waxayna la soo wareegtay saddex ciyaartoy halka ay laba ciyaartoy kooxdeeda ka baxeen. Dhaq dhaqaaqa suuqa ee Leverkusen.
Ciyaartoyda Ku Soo Biirtay: Kerem Demirbay (Hoffenheim), Moussa Diaby (Paris), Daley Sinkgraven (Ajax)
Ciyaartoyda Ka Baxday: Thorsten Kirschbaum (VVV), Julian Brandt (Dortmund)
Chelsea: Kooxda Chelsea oo xili ciyaareedkan dib ugu soo laabtay Champions League waxay ilaa hadda ka mid tahay kooxaha aan ilaa hadda suuqa sida buuxda u galin waxaana u dheer in ay wayday adeegii xidiga kooxdeeda ugu fiicnaa ee Eden Hazard.
Chelsea waxay bishii January heshiis dhamaystiran la sii gaadhay xidigii hore ee kooxda Borussia Dortmund ee Christian Pulisic kaas oo xagaagan soo gaadhay Stamford Bridge.
Chelsea waxaa kooxdeeda ka baxay lix ciyaartoy oo heerar kala duwan ahaa waxaana ugu magac wayn Eden Hazard waxa kale oo la fasaxay Gary Cahil halka Robert Green uu kadib koobkii Europa League ciyaaraha iskaga fadhiistay. dhaq dhaqaaqa suuqa ee Chelsea.
Ciyaartoyda Ku Soo Biirtay: Christian Pulisic
Ciyaartoyda Ka Baxday: Eduardo (Braga), Eden Hazard (Real Madrid), Kylian Hazard (Cercle Brugge), Ola Aina (Torino), Gary Cahill (la fasaxay), Robert Green (ciyaaraha ka fadhiistay)
RIIX 2,3,4, si aad u wada akhrisato dhaq dhaqaaqa suuqa ee kooxaha Champions League u soo baxay.
Barcelona: Barcelona waxay wali la xanuunsanaysaa guuldaradii afar dhamaadkii UEFA Champions League waxayna si wayn u doonaysaa in ay suuqa ka hesho saxiiyo ay kooxdeeda ugu diyaarin karto xili ciyaareedka cusub gaar ahaan tartanka Champions League.
Barcelona waxay ilaa hadda la soo saxiixatay laba xidig kuwaas oo waliba heshiiskooda sii gashay bishii January ee horaantii sanadkan waana kuwo hordhac u noqon doona isbadalka ay Camp Nou ka doonayaan.
Barcelona ayaa hadda si rasmi ah u dhamaystiri karta saxiixa ugu muhiimsan ee Frenkie De Jong kaas oo qaybtii labaad ee xili ciyaareedkii la soo dhaafay ku sii nagaaday kooxda uu ka tirsanaa ee Ajax.
Barcelona hal ciyaartoy oo kaliya ayaa hadda ka baxay kaas oo Dortmund ku biiray. Halkan ka eeg dhaq dhaqaaqa suuqa ee Barcelona.
Ciyaartoyda Ku Soo Biirtay: Frenkie de Jong (Ajax), Emerson (Atlético Mineiro)
Ciyaartoyda Ka Baxday: Mateu Morey (Dortmund)
Bayern München: Kooxda Bayern Munich waxay ka mid tahay kooxa sida wayn u cadhaysan ee fashilkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay soo gaadhay gaar ahaan Champions League waxayna haddaba sameeyeen saxiixyo aad muhiim u ah.
Bayern Munich ayaa saddex ciyaartoy oo muhiim ah la soo wareegtay waxaya kooxdeeda ka dirtay lix ciyaartoy oo ay qaar iibisay halka kuwo kale si xor ah lagu fasaxay.
Halkan kaga bogo dhaq dhaqaaqa suuqa ee ay Bayern Munich ilaa hadda samaysay.
Ciyaartoyda Ku Soo Biirtay: Lucas Hernández (Atlético Madrid), Benjamin Pavard (Stuttgart), Jann-Fiete Arp (Hamburg)
Ciyaartoyda Ka Baxday: Marco Friedl (Bremen), Jonathan Meier (Mainz), Franck Ribéry (La fasaxay), Arjen Robben (La fasaxay), Rafinha (La fasaxay), Mats Hummels (Dortmund)
Ciyaartoyda Ku Soo Biirtay: Jhonder Cádiz (Setúbal)
Ciyaartoyda Ka Baxday: Raúl Jiménez (Wolves)
Ciyaartoyda Ku Soo Biirtay: Julian Brandt (Leverkusen), Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach), Mateu Morey (Barcelona), Mats Hummels (Bayern)
Ciyaartoyda Ka Baxday: Alexander Isak (Real Sociedad)